आज त्यहाँ संसारको सबैभन्दा ठूलो पुनरुद्धì | Apg29
हरेक दिन, येशूले विश्वास गर्न 780 000 बारेमा!
इतिहास धेरै हाम्रो समयमा संसारभरि सुरक्षित अघि कहिल्यै भएको। संसारको सबैभन्दा ठूलो क्रप मा salvaged जब हामी एक समयमा बाँचिरहेका छौं!
धेरै हाम्रो समय को ठूलो बर्बाद लागि व्यस्त पर्खने छन्। आफ्नो भाग को लागि विचार पुनरुद्धार, पूर्ण छोडिन्छ। तर, प्रिय मित्र: यो एक generalfel भएको छ। हाम्रो संसारमा ठूलो पुनरुद्धार अहिले छ! यसलाई अब रूपमा कहिल्यै अघि इतिहास धेरै सुरक्षित गरिएको छ। लगभग अप 780 000 मानिसहरूलाई येशूले स्वीकार र हरेक दिन सुरक्षित पृथ्वी वरिपरि!
निश्चित, यो पनि हाम्रो समय को बर्बादी अन्तर्गत, हामी थाहा छ, तर ताक छैन अन्धो बर्बाद गर्छन, तर धेरै मानिसहरू परमेश्वरको राज्यको हरेक दिन मा आउने आनन्दित छ। कहिलेकाहीं म येशूको समय प्रेरितहरूको विचार हामी डाह यो ऐतिहासिक समय को भाग हुनेछ जो आज हुन् भनेर हामी अब प्रत्यक्ष मा। संसारको सबैभन्दा ठूलो क्रप मा salvaged बेला!
संसारको आज पुनरुद्धार जारी
यो हाम्रो समय मा भइरहेको छ रूपमा इतिहास धेरै संसारभरि सुरक्षित अघि कहिल्यै भएको। हरेक दिन, येशूले विश्वास गर्न 780 000 बारेमा!
आज हामी विश्वका 2.5 अर्ब मसीहीहरूले बारेमा हुन् भनेर आशा।
यी 70% सचेत विश्वास गर्न 1.75 अर्ब बनाएर, को 1900s समयमा आएका छन्।
यी को, 1.75 अर्ब, तिनीहरूलाई को 70% विश्वास गर्न 1945 पछि आएको, जो 1.2 अर्ब बारेमा हालतमा।
यी को, 1.2 अर्ब 1945 पछि विश्वास, 70% पछिल्लो तीन वर्ष मा विश्वास गरे।
बारेमा 857 मिलियन पछिल्लो तीन वर्ष विश्वास छ कि यो हालतमा।
बारेमा 285 मिलियन विगत तीन वर्ष प्रत्येक विश्वास र पुनरुद्धार जारी यो हालतमा।
कुनै कुरा तपाईं अनुसन्धान गरिरहेका के, तपाईं नाटकीय हाम्रो समय मा कि तीव्रता बढ पाउन।
स्रोत: फेसबुक - निल्स Gunnar Lönnegren
780 000 हरेक दिन
म शताब्दीको यसको आफ्नै गणना जारी छ भने, 285 लाख बचत हुनेछ हरेक वर्ष त बारेमा हुनेछ:
23,7 लाख हरेक महिना बचत
5.5 मिलियन हरेक हप्ता सुरक्षित
780 000 प्रत्येक दिन सुरक्षित
हामी विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुनरुद्धार भइरहेको छन्! यो हाम्रो समय मा भइरहेको छ रूपमा इतिहास धेरै संसारभरि सुरक्षित अघि कहिल्यै भएको।
V 04, torsdag 28 januari 2021 kl 11:41